Nhoroondo yekambani - Changzhou Hollysen Technology Trading Co., Ltd.
Unyanzvi hwemotokari mweya-kutonhodza compressors mugadziri
Nyanzvi yekupaka air conditioner inogadzira
Changzhou Hollysen Technology Kutengesa Co., Ltd.is a subsidiary of Changzhou Kangpurui Automotive Air Conditioning Co., Ltd.Iindasitiri yekutsvagisa kwehunyanzvi nekusimudzira, kugadzira uye kutengesa mota air-kutonhodza ma compressors uye kupaka mweya ma conditioner. Indasitiri yedu iri Niutang Industrial Park, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, zviri pakati Yangtze River Delta, pedyo Shanghai-Nanjing Expressway uye Yanjiang Expressway, pamwe nyore chokufambisa uye nzvimbo dzakanaka.
Parizvino indasitiri iyi ine vashandi vanopfuura mazana matatu, anopfuura makumi maviri maR & D matimu enhengo, uye anopfuura makumi maviri emabhizimusi emabhizimusi emabhizimusi ekunze.Saka indasitiri yedu yakazara nevashandi. Iyo indasitiri yakavaka yavo yega kuita kwekuyedza kuyedzwa, kuyedzwa kwenguva refu, kuyedzwa kweruzha, kuyedzwa kwekudengenyeka, kuongororwa chaiko kwemotokari uye kuyedzwa kwemakanika uye mamwe marabhoritari akajairwa. Iyo yekutsvagisa uye nekuvandudza pfungwa yeindasitiri "inosangana nevatengi zvinodikanwa, hunyanzvi hunopfuura hwako" .Takagadzirisa uye nekugadzira zvigadzirwa zvinogara zviripo kune vatengi vedu. Zvigadzirwa zvedu zvikuru ndezve rotary vane-mhando mota air conditioner compressor akateedzera, kusanganisira KPR-30E (nyowani magetsi tekinoroji), KPR-43E (nyowani tekinoroji yesimba), KPR-43, KPR-63, KPR-83, KPR-96, KPR -110, KPR-120, KPR-140 compressors, uye pisitoni compressor dzakateedzana, kusanganisira 5H, 7H, 10S, kusiana kwekuchinja komputa uye Mota yekupaka Mhepo inogadzirisa.
Iine makore gumi nematatu ekuvandudza, kambani yedu yaive yakasimba solid technical simba uye yakasimba dhizaini uye R&D kugona. Iyo indasitiri ine yakakwana yehungwaru pfuma manejimendi manejimendi sisitimu uye yakapasa iyo IATF1 6949 yepasi rose mota indasitiri yemhando yepamusoro manejimendi sisitimu sisitimu. Iyo indasitiri yakateerana yakawana anopfuura makumi mana ekugadzirwa, anoshanda uye ekuonekwa patent, akahwina zita reNational High-tech Enterprises.
Zvigadzirwa zveindasitiri zvakatumirwa kuEurope, South America, North America, Middle East neAsia, uye chiratidzo cheindasitiri chakakunda mukurumbira wakakwirira mumusika wepasi rese. Kunyangwe zvave ikozvino kana mune ramangwana, iyo kambani inozopa nemoyo wese vatengi vedu zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, hunyanzvi hwechigadzirwa tekinoroji uye yepamusoro-yekutengesa sevhisi sevhisi, usamborega kuongorora nekuvandudza, nekuvandudza panguva imwe chete nemakambani epamba uye epasi rose muChina .
Saka ndokumbirawo unzwe wakasununguka kuti utaure nesu kuti tibvunze.
Zvakare iwe unokwanisa kuuya kubhizimusi rako wega kuti uwane zvimwe kuziva kwedu. Uye isu zvirokwazvo tichakupa yakanakisa kotesheni uye mushure mekutengesa sevhisi.